Korontana tao Batoumi (Zeorzia) : Tsy Tantaranà Sazim-Piantsonana Fotsiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2017 16:24 GMT
Araben'i Batoumi. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe ao amin'ny Wikipedia, nopihan'i Oley24.
Indray marainan'ny 12 Martsa, notarin'ny korontana kely vitsivitsy naharatràna olona teo amin'ny roapolo teo i Batoumi, tanàna faharoa ao Zeorzia. Betsaka fiara niongana.
Ny korontana, izay nampiasàn'ireo mpanao hetsipanoherana vato sy tsipoapoaka ho toy ny fitaovampiadiana tamin'ny fifandonana nifanatrehany tamin'ireo mpitandro filaminana, dia teraka noho ny fandàvan'ny olona iray tsy handoa sazim-piantsonana, saingy toa vao mainka nofahanan'ireo tsy hafaliana nisavovona be.
Nambaran'ireo manampahefana fa efa nilamina ilay safotofoto.
Toy izao ankehitriny ny endriky ny varavarambe fidirana ao amin'ny kaomisarian'ny polisy ao Batoumi. Mampalahelo ny mahita ny tanàna ‘rava’ tanatin'ny indray mipi-maso. pic.twitter.com/cRLV72iqFL .
Ambangovangony amin'ny faritra nisy ny korontana ao Batoumi amin'izao fotoana izao. Ny teboka entina hakàna saina dia ny kafe Akhali Gemo, 78 làlana Gorgiladze.
Batoumi no renivohitry ny ao Adjarie, faritra iray mizaka tena mampiasa ny tenimparitra zeorziana ary misy miozolmàna vitsy an'isa. Tanàna iray mambabo fo any amin'ny morontsiraka zeorziana ao amin'ny Ranomasina Mainty, izay fampiasambola totoafo nandritry ny ampolo taona no mitàna ny ainy, milamina ny rivotra iainana ao Batoumi ary mitaraikiraiky amin'ny hainahandrony eo an-toerana. Na ny khachapuri miendrika sambo ananany aza, ny mofo misy fraomazy, dia miavaka amin'ny an'ireo faritra hafa ao Zeorzia ary, miainga avy amin'ny endriny, dia mahatonga hisaintsaina ny pide tiorka, saingy miaraka aminà atody iray mitsivalana eo ambonin'ilay fraomazy.
Toa nandeha ho azy ny hadisoam-panantenana ara-politika nandritra ilay fihaonambe tamin'ny 12 Martsa, izay nivadika ho herisetra rehefa injay nosamborina i Jimi Varchanidze, ilay rangahy nahazo ilay sazim-piantsonana. Mpanao gazety iray avy ao Tbilissi renivohitra no nandefa rohy iray mankany amin'ireo saripikan'ilay hetsi-panoherana, izay tian'ireo mponina ao Batoumi hanamafisana ny maha-izy azy eo an-toerana hamaliany ireo teny lazaina ho nataon'ny lehiben'ny polisy eo an-tanàna nilaza fa “Tatars” ireo miozolmana ao Batoumi.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy ireo mponina da nitaky ny fialàn'ny lehiben'ny polisy, teratany avy any Gori, tanàna nahaterahan'ilay sovietika mpanao jadona fahiny, Joseph Staline, eo amin'ny 200 km miala eo.
‘Zeorziana ve isika ? Eny, izany isika! Tsy Adjars isika a ? Izany isika ! ‘ ‘Zeorziana Adjars mizolmana isika’
Sarin'ny hetsika bitika nitranga teo anoloan'ny kaomisarian'ny polisy tao Batoumi ny 9 Martsa. Eo amin'ny sorabaventy : “Tsy Tatars ireo Adjars, andriamatoa polisy’
Sazy iray, mba marina ve?
Raha momba ny niteraka ilay korontana, tantarain‘ny foibe fanarahamaso ny demaokrasia sy ny fahalalahana “Democracy and Freedom Watch” hoe :
Teraka ilay korontana rehefa nolavin'ny rangahy iray ny sazim-piantsonana taminà toerana iray tsy azo ijanonana, ary nosamborin'ny polisy izy rehefa avy nifandahatra tamin'izy ireo.
Avy eo, samihafa ny fitantaràna ny zavatra niseho, fa ny fantatra, dia niharatsy ka niafara tamin'ny fisamborana lehilahy enina ilay fifandirana.
Taty aoriana, olona an-jatony maro, lehilahy ny ankamaroany, no nifamory teo anoloan'ny kaomisarian'ny polisy nitaky ny hamelàna malalaka ireo olona nosamborina sy ny fametrahana fialàn'ny mpitantana ny polisy..
Nantsoina ny polisy mpandrava korontana handevona ilay toedraharaha. Tany amin'ny manodidina ny misasakalina tany, voalaza fa nampiasa entona mandatsaka ranomaso tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy.
Lahatsary iray toa noraketina avy ao anatin'ny kaomisaria no mampiseho vato mirarak'ompana nikendry ilay tranobe, ary polisy mpandrava korontana milanja ampinga mitandahatra manao dia mianotra.
Nandritra izany no navotsotra i Varchanidze. Nolazainy fa najanony teo anoloan'ny toerana fivarotana fanafody ny fiarany, ary nobedesina am-bava izy rehefa tafavoaka ny magazay, talohan'ny nitondràna azy fa hoe nifamaly tamin'ireo polisy.
Araka ny lazain'ny “Democracy and Freedom Watch“, “nohamafisin'ireo lehilahy politisiana avy amin'ny fanoherana fa efa fotoana elaela ihany ireo olona ao Batoumi no tezitra momba ireo ‘sazy ara-bola tsy araka ny tokony ho izy’, lafo be omen'ny polisy ao amin'ity faritra ao amin'ny Ranomasina Mainty ity”.
Tato anatin'ny fotoana vitsy tao Batoumi, betsaka fitarainana nangotrakotraka tao an-toerana ka izany no anton'ny korontana goavana tahaka izao noho ny sazim-piantsonana nomen'ny polisy misahana fifamoivoizana.
Batoumi : Na eo aza ny famporisihan'ireo olona avy eny ivelany, tena zavatra ankavitsiana ireo korontana feno herisetra, toy ny tena mampiseho tsy hafaliana marina mihitsy amin'ny polisy, saingy tsy izay monja
Avy hatrany ny praiminisitra zeorziana, Guiorgui Kvirikachvili, dia nanameloka ireo “hery politika” ho namelona ny afo.
Azo raisina ho sarinteny ataony amin'ilay olom-panjakana tany aloha, Mikheïl Saakachvili, sy ny Hetsika Nasionaly Mitambatra notarihany, izay tsy nahavita niverina naka ny fifehezana ny parlemanta tamin'ireo fifidianana natao ny Oktobra lasa teo, raha ny tsindrimandrin'ny sasany indray kosa nahita ny fidirana amim-pahatretrehan'ireo okraniana mpankasitraka azy amin'izao fotoana izao ao Zeorzia.
Tsy ela akory izay, nirehidrehitra ny fifamelezan'ny Nofy Zeoriziana etsy ankilany, soloin'i Kvirikachvili tena ary voatohana ara-bolan'ilay mpanapitrisa Bidzina Ivanichvili, sy Saakashvili ary ny MNU etsy andaniny, taorian'ny nanoloran'ny didy iray avy amin'ny fitsaràna ny televizionan'ny mpanohitra, Roustavi-2 hiverina ambany fitantanan'ny MNU, fiverenany any amin'ireo tompony taloha izay heverina fa mirona kokoa manaraka ny fitsipika apetraky ny governemanta.
Kanefa manana ny politikany manokana ao an-toerana i Batoumi, lavitry ny fifanenjanan-tsandry hita manerana ny firenena. Efa hatry ny ela, miaraka miaina am-pilaminana ireo vondrom-piarahamonina kristiana sy miozolmana eto, saingy misy taratra fifanenjanana miseho, indrindra manodidina ny asa fanorenana ireo maoske sy ny dindo ara-toerakarena avy amin’ Tiorkia hita saiky eny rehetra eny ao anatinà faritra iray izay fahiny dia ny Ottoman no nifehy azy.
Raha mivoitra ho toy ny fitodian'ny mpizahatany ilay tanàna, ary tendron'ny filokàna ara-bola ao amin'ny faritra, amin'ny ampahany noho ireo fampiasambola goavana ataon'ny Tiorka, ireo vahoaka miasa sy monina ivelan'ny vontsin'ireny hetsika misonga be ireny kosa tsy tafiditra anatin'ny lanonana.